अर्थ / वाणिज्य Archives - Mega Online Television
लगातार बढेको सुनको मूल्य बुधबार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सात सय रुपैयाँले घटेर छापावाला सुनको मूल्य ७० हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा सात सय रुपैयाँले घटेर ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ७० हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर आठ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
सुनको मूल्य दिन प्रति दिन बढ्दै, तोलामा एक हजार तीन सय रुपैयाँले वृद्धि
August 4, 2019 Editorial Team
सुनको मूल्य दिन प्रति दिन उच्च हुदै गएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा एक हजार तीन सय रुपैयाँले बढेर ६६ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ६५ हजार रुपैयाँ थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा एक हजार तीन सय रुपैयाँले बढेर ६६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको हो । आइतबार कायम भएको मूल्यले शुक्रबारको उच्च मूल्यलाई उछिनेको हो । चाँदीको मूल्य तोलामा पाँच रुपैयाँले बढेर सात सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
बजेटले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छः डा युवराज खतिवडा
June 23, 2019 June 23, 2019 Editorial Team
८ असार,काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँल सरकारी, नीजि र सहकारीलगायत सबै मिलेर काम गर्ने हो भने आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो बिषय नभएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट विनियोजनमा तराई–मधेशलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधारमा मात्र रु एक अर्वमाथि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिने नेपाल रहेको जानकारी…
Featured अर्थ / वाणिज्य बिशेष राजनीति विचार / विश्लेषण समाचार
संक्रमणकालिन अवस्थाको जस्तो बजेट आएको डा. भट्टराइको आरोप
June 21, 2019 June 21, 2019 Editorial Team
६ असार, काठमाडौा । पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डराएर ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बजेटमाथि धारणा राख्दै भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले वर्तमान बजेट संक्रमणकालिन अवस्थाको जस्तो बजेट आएको आरोप छ । उहँले अहिलेको बजेट आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने र विकास खर्च पनि बढाएर ल्याएको भए अर्थतन्त्रमा सही किसिमले प्रभाव पार्ने थियो भन्ने भट्टराईको भनाइ थियो । बजेटको संरचनामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको उहाँको भनाइ छ । डा. भट्टराईले संविधान संशोधन गर्ने र मधेस तथा थारु…
असार ३, काठमाडौं । हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्गको निमित्त छुट्याइएको ५ करोड रुपैंया अध्ययनबिना नै फ्रिज हुन लागेको छ । ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग’को निर्माणको योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर०का लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ अध्ययन नै नगरी फ्रिज हुन लागेको हो । काम सुरु गर्न संघीय सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै प्रदेश सरकार सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि अग्रसर भएको हो । हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी ९एनपीबीसीएल०ले पाएको छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अग्रसरतामा…